ရှေးကလူကြီးတွေအသုံးပြုသည့် အရှည်မြန် ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေမည့် အိမ်တွင်းနည်း - Latest Myanmar News
ရှေးကလူကြီးတွေအသုံးပြုသည့် အရှည်မြန် ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေမည့် အိမ်တွင်းနည်း
(ကြက်သံ အထွက်မြန်တာ ဆံကေသာ )
ယခင်က မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများက ကျွန်တော်ကိုတွေ့ပါလျှင်ပြောင်ကြီးတဲ့။အချို့ကပြောင်ပြောင်တဲ့လူကြားသူကြားလည်းမရှောင်တော့။ယခုကျွန်တော်ကို ပြောင်ကြီးလို့မခေါ်ကြတော့ပါ။
ကြက်သွန်နီနဲ့သံပုရာသီးပဲလိုပါတယ်။ဒီနည်းကို အဘိုးသံပေးခဲ့တယ်လို့ ဆေးနည်းပေးသူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မယုံကြည်ခဲ့ပါ။ ခုတော့ကျွန်တော်ယုံခဲ့ပါပြီ။
(၁)ကြက်သွန်နီ အခွံနွာပြီး ထုထောင်း၍ သတ္တုရည်ယူပါ။
(၂) သံပုရာရည်ကို ယူပါ။
ထုိုသတ္တုရည်နှစ်မျိုးကို စတီးဇွန်း(၃)ဇွန်းဆီလောက်အရည်သန့်သန့်ရစေရန် အ၀တ်သန့်သန့်ဖြင့် စစ်ပါ။နေ့စဉ် အိပ်ရာ ၀င်တိုင်း ပြောင်နေသောဦးခေါင်းကိုလိမ်းပြီးအိပ်ပါ။စလုပ်စဉ် ကြက်သွန်နံ့ နံသော်လည်းနောက်ပိုင်း အကျင့်ရသွား ပါလိမ့်မယ်။(၁၀)ရက်လောက်မှာပင် ထူးခြားခြင်းကြုံပါလိမ့်မည်။ပြောင်နေသောဦးခေါင်းအရည်ပြားတွင် ဆံပင် လေးများ ပေါက်လာမည်က ဧကန်အမှန်ပင်ဖြစ် ပါလိမ့်မည်။ကြက်သွန်နီနှင့်သံပုရာက အိမ်တိုင်းဆောင် ထားတတ်သော အိမ်တွင်းအသုံးအဆောင်ဖြစ်၍ လုပ်ဆောင်လိုသူတို့အတွက် အခက်အခဲရှိ မည်မထင်ပါ။
(၁) ကြက်သွန်ဖြူသည် ဆာလ်ဖာဓာတ်ကြွယ်ဝပါသည်။
(၂)ကြက်သွန်နီသည် ကိုလာဂျင် ပရိုတိန်းထုတ်လုပ်မှုကောင်းစေသဖြင့် မွေးညှင်းပေါက်လေးများကို ပွင့်စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေကာ ဆံပင်မွေးကို ခိုင်မာစေပါသည်။
(၃)ထိပ်ပြောင်သူများနှင့်နေရာကွက်ပြီးဆံပင်မပေါက်သူများ၊ ဦးရေပြား(ဘောက်)ထသူတို့ကို ကောင်းစွာအကျိုးပြုပါသည်.
(၄)ကြက်သွန်နီ သတ္တုရည်ကို မိနစ်(၄၀)ခန့် လိမ်းထားပြီးခေါင်းလျှော်ရည်ပျော့ ပျော့ဖြင့် ဆေးကြောပေးပါက ထိပ်ပြောင်သူများ ဆံပင် ပေါက်နှုန်းမြန်ဆန် လာသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း ၊အီရတ်သုတေသီတို့ အကြံပြုထားပြီး ထိုအဆိုကို အမေရိကန် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ် ကဲမှုဌာန ( FDA ) ကထောက်ခံခဲ့ပါသည်။
ထုိ့ကြောင့် ကြက်သွန်နီနှင့်သံပုရာရည်ကိုရောစပ်လိမ်းလူး ပေးခြင်းဖြင့် ထိပ်ပြောင်သူများ ဆံပင်အမြန်ပြန် ပေါက်စေရေး နည်းလမ်းလေးရေးလိုက်ပါသည်။
ရှေးကလူကွီးတှအေသုံးပွုသညျ့ အရှညျမွနျ ဆံပငျပွနျပေါကျစမေညျ့ အိမျတှငျးနညျး
(ကွကျသံ အထှကျမွနျတာ ဆံကသော )
ယခငျက မိတျဆှသေူငယျခငျြးမြားက ကြှနျတျောကိုတှပေ့ါလြှငျပွောငျကွီးတဲ့။အခြို့ကပွောငျပွောငျတဲ့လူကွားသူကွားလညျးမရှောငျတော့။ယခုကြှနျတျောကို ပွောငျကွီးလို့မချေါကွတော့ပါ။
ကွကျသှနျနီနဲ့သံပုရာသီးပဲလိုပါတယျ။ဒီနညျးကို အဘိုးသံပေးခဲ့တယျလို့ ဆေးနညျးပေးသူကပွောပါတယျ။ကြှနျတျောမယုံကွညျခဲ့ပါ။ ခုတော့ကြှနျတျောယုံခဲ့ပါပွီ။
(၁)ကွကျသှနျနီ အခှံနှာပွီး ထုထောငျး၍ သတ်တုရညျယူပါ။
(၂) သံပုရာရညျကို ယူပါ။
ထုိုသတ်တုရညျနှဈမြိုးကို စတီးဇှနျး(၃)ဇှနျးဆီလောကျအရညျသနျ့သနျ့ရစရေနျ အဝတျသနျ့သနျ့ဖွငျ့ စဈပါ။နစေ့ဉျ အိပျရာ ၀ငျတိုငျး ပွောငျနသေောဦးခေါငျးကိုလိမျးပွီးအိပျပါ။စလုပျစဉျ ကွကျသှနျနံ့ နံသျောလညျးနောကျပိုငျး အကငျြ့ရသှား ပါလိမျ့မယျ။(၁၀)ရကျလောကျမှာပငျ ထူးခွားခွငျးကွုံပါလိမျ့မညျ။ပွောငျနသေောဦးခေါငျးအရညျပွားတှငျ ဆံပငျ လေးမြား ပေါကျလာမညျက ဧကနျအမှနျပငျဖွဈ ပါလိမျ့မညျ။ကွကျသှနျနီနှငျ့သံပုရာက အိမျတိုငျးဆောငျ ထားတတျသော အိမျတှငျးအသုံးအဆောငျဖွဈ၍ လုပျဆောငျလိုသူတို့အတှကျ အခကျအခဲရှိ မညျမထငျပါ။
(၁) ကွကျသှနျဖွူသညျ ဆာလျဖာဓာတျကွှယျဝပါသညျ။
(၂)ကွကျသှနျနီသညျ ကိုလာဂငျြ ပရိုတိနျးထုတျလုပျမှုကောငျးစသေဖွငျ့ မှေးညှငျးပေါကျလေးမြားကို ပှငျ့စပွေီး သှေးလညျပတျမှုကောငျးစကော ဆံပငျမှေးကို ခိုငျမာစပေါသညျ။
(၃)ထိပျပွောငျသူမြားနှငျ့နရောကှကျပွီးဆံပငျမပေါကျသူမြား၊ ဦးရပွေား(ဘောကျ)ထသူတို့ကို ကောငျးစှာအကြိုးပွုပါသညျ.
(၄)ကွကျသှနျနီ သတ်တုရညျကို မိနဈ(၄၀)ခနျ့ လိမျးထားပွီးခေါငျးလြှျောရညျပြော့ ပြော့ဖွငျ့ ဆေးကွောပေးပါက ထိပျပွောငျသူမြား ဆံပငျ ပေါကျနှုနျးမွနျဆနျ လာသညျကိုတှရေ့ကွောငျး ၊အီရတျသုတသေီတို့ အကွံပွုထားပွီး ထိုအဆိုကို အမရေိကနျ အစားအသောကျနှငျ့ ဆေးဝါးကှပျ ကဲမှုဌာန ( FDA ) ကထောကျခံခဲ့ပါသညျ။
ထုိ့ကွောငျ့ ကွကျသှနျနီနှငျ့သံပုရာရညျကိုရောစပျလိမျးလူး ပေးခွငျးဖွငျ့ ထိပျပွောငျသူမြား ဆံပငျအမွနျပွနျ ပေါကျစရေေး နညျးလမျးလေးရေးလိုကျပါသညျ။
Categories အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး Post navigation
၀န်ထမ်းကောင်းတွေ ဘာလို့ အလုပ်ထွက်ကုန်ကြရတာလဲ